CEC Windsor 6-12 - Kulliyadaha Hore ee Colorado
QOysaska Aagga WWINDSOOR! Waxaan ku darnay isdiiwaangelinta
Ardayda Fasalada 10-12aad
Si aad u noqoto CEC Windsor 6-12! Hada Isqoro! Marnaba aad uma degdegsana in la qiyaaso! Waxaan bixinaa kulliyad bilaash ah
& Dariiqooyinka Shaqada ee
Ardayda Fasalka 6aad-12aad! Hada Isqoro!
Ku soo dhawoow CEC Windsor 6-12!
Kulliyadaha Hore ee Colorado Windsor (CECW) waxay albaabada u fureen 2019 sidii waxbarasho bilaasha ah, dugsi-dhexe oo dugsi dadweyne oo furan oo loogu talagalay ardayda waqti-buuxa iyo kuwa dhiman ee fasallada 6-8. Sida ka yar, xerada korinta, CECW waxay bixisaa jawi shakhsi iyo taageero halkaas oo ardaydu ay awoodaan si ay u raacaan gool waxbarashada gaarka ah iyo shakhsi ahaaneed. CECW waxay ku dartay Akadeemiyada Freshman ee ardayda fasalka 9aad sanadka 2020 waxaana ku faraxsanahay inaan ku dhawaaqno inaan ku darnay isdiiwaangelinta ardayda fasalka 10aad - 12aad ee bilaabmaya Dayrta 2022 si ay u noqdaan CECW 6-12!
2022-23 Kalandarka Dugsiga
Hoggaaminta, oggolaanshaha, la-talinta, iyo kooxaha tacliinta ee CECW waxay aqoonsan yihiin mas'uuliyadda naloo dhiibay si aan u gaarsiinno saameyn togan iyo nolosha oo dhan ardaydeena iyo qoysaskooda, tacliin ahaan iyo noloshooda labadaba. Xubin kastaa wuu fahmayaa oo wuxuu la qaybsanayaa fulinta Bayaanka Hawlgalka CEC isagoo isticmaalaya kheyraad kasta oo suurtogal ah iyo inuu dhiso bulsho adag oo kambaska oo ay ka buuxdo xamaasad oo ay hogaaminayso heer sare.
Lacey Scadden - Hormuudka Tacliinta iyo La-talinta - View Profile
Paige Goodskey - Diiwaan-hayaha - View Profile
Aly Long - Xirfadle sare - View Profile
CEC Windsor waxay ku faraxsan tahay inay ku dhawaaqdo inaanu ku kordhinayno kuleejka iyo fursadaha shaqo ee ardayda fasalada 6aad-12aad.
Isla markiiba laga bilaabo, diiwaangelinta waqti-buuxa iyo mid-dhiman ee ardayda fasalka 10aad ilaa 12aad ayaa lagu daray xaruntayada CEC Windsor sannad dugsiyeedka 2022-2023 si aan si wanaagsan ugu adeegno qoysaskeena Windsor! Tani waxay ka dhigan tahay in CEC Windsor 6-9 ay hadda tahay CEC Windsor 6-12, iyada oo sii ballaarinaysa helitaanka dariiqooyinkeenna gaarka ah ee loogu talagalay shahaadooyinka kulliyadda bilaashka ah, shahaadooyinka shaqada, iyo in ka badan!
Wax badan ka baro horumarkan xiisaha leh ee xarunteena Windsor:
Warqad ku socota Qoysaska CEC Windsor oo ka socota Maamulaha Sare ee Maamulkayaga, Sandi Brown